Xiriirka FA-ga Ingiriiska oo go’aan ka soo saaray kulanka Final-ka FA Cup-ka ee ay ku ballansan yihiin Kooxaha Arsenal iyo Chelsea – Gool FM
(London) 30 Luulyo 2020. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa go’aan ka soo saaray kulanka Final-ka FA Cup-ka ee ay Sabtida ku ballsan yihiin Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Chelsea.
Go’aankan oo ah mid aysan jecleysan Kooxaha Arsenal iyo Chelsea ayaa lagu dabaqi-doonaa kulanka Final-ka FA Cup-ka ee ka dhici doona garoonka qaranka Ingiriiska ee Wembley.
Waxa uu xiriirku shaaciyey isbeddel lagu sameyn doono qaabkii ay markii hore kooxaha koobka loo guddoonsiin jiray, isla amrkaana waxaa meesha laga saarayaa xafladdii lagu qaban jiray garoonka gudihiisa iyo dabbaal-deggii weynaa ee sida gaarka ah garonka loogu qurxin jiray kooxda ku guuleysata Koobka.
Koobka kooxda ku guuleysata ayaa markii hore iska xaadirin jirtay qaybta Royal Box , halkaasoo lagu guddoonsiin jiray koobka FA Cup-ka, iyagoo halkaas ku sameyn jiray dabbaal-degyo ay ku muujinayaan koobka ugu cimriga badan Ingiriiska.
Yeelkeede, xiriirka ayaa waxa uu kaliya koobka u gacan gelin doonaa kooxdii ku guuleysata Sabtida Gunners ama Blues, iyadoo aysan jiri doonin xafladdii iyo dabbaal-degyadii waa weynaa ee garoonka dhexdiisa lagu sameyn jiray, waxaana marka ay koobka gacanta ku dhigto kooxda ku guuleysata ay xiddigaha oo kaligood ahi garoonka dhexdiisa ku muujin doonaan farxaddooda.
Waxa uu xiriirka FA-gu sheegay in arrintan ay uga golleeyihiin inay ku yareeyaan halista Coronavirus ee markale dunida dib uga bilaabay inuu faafo.
Kooxda Chelsea oo tartanka ka soo reebtay Manchester United ayaa madaxa gelin doonta Arsenal oo ka soo adkaatay Manchester City wareegga afar dhammaadka FA Cup-ka, waana markii ugu horreysay oo koob final ah ay isaga hor’imaan doonaan labada macallin ee Frank Lampard iyo Mikel Arteta.
Kai Havertz oo aan ka tagi doonin Kooxda Bayer Leverkusen illaa dhammaadka bisha soo socota... (Sidee wax u jiraan?)